Ndakabatiswa zibeche ramaiguru rakafuta kunge chitsuro ndikatunda ndisati ndasvira - Part 1 - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakabatiswa zibeche ramaiguru rakafuta kunge chitsuro ndikatunda ndisati ndasvira – Part 1
Ndakabatiswa zibeche ramaiguru rakafuta kunge chitsuro ndikatunda ndisati ndasvira – Part 1
Ndini hangu apo ndichango pedza form 6 yangu ndaigara namaiguru mukadzi wamukoma kuKadoma . Zita ndoitwa Tapiwa ndaiva ne 19 yrs and vakadzi vanondida ndisina kuvanyenga, zvisinei namaiguru taiwirirana chaizvo asi ma1 akazotanga mukoma pavanzi vanoshandira kuHarare.
Ndakasara namaiguru vangu vaiva nemuviri uri pakati nepakati asi dako raifamba richitaura ini ndaisava nepfungwa nazvo, vaiva vatsvuku nemazamu eround. Pakuenda kwakaita mukoma zuva rekutanga rechi two ah one week tigere zvedu zvakanaka, hepano week rechi 3 ndakatorara zvangu mumba mangu neka boxer short apa ndakatarisa mudenga ndichitorota zvangu.
Ndakazopepuka ndanzwa kuremerwa padumbu kudai ah maiguru vakandigarira uku ziso ravo riri pamboro yangu ” murisei bamunini ” ndiribho maiguru, ndakapindura zvangu. Pandakawona kamini kavainge vakapfeka apa mazikumbo matsvuku avo, ndakada kuti ndisazvifunge asi ziso raindiparira kusvika mboro yazotsamwa. Ndakayedza nepose pandogona kuti vasazvione asi haa vakazviona kuti mboro yanga yamira apawo ndine chipo rino dema rine mazitsinga, apa richigwinha gwinha apa tuma siriri twakutobuda.
Ndakabva ndati nhai maiguru munondiisirei pamuyedzo, kuzodaro vakandiseka ndobva vaiti mbaa aah yakutobonyorwa paye ummm nhai bamunini ko munoti dai dzaichinjanwa handiti maitopawo mukoma wenyu nekuti kake kanopinda ka 4 mune yenyu. Ko ini ndaimboda zvekutaura here aiwawo ndakanga ndakutoda beche ko zve romance zvaizikanwa nani ndakapushira kwakadaro ndokumira zvino ndava musvo.
Ndakabata kadress kavo ndiko kwakadaro uko ndichibvisa braa zvino mboro ikati yagumbuka ko zvekusvira ndainge ndakutotangirawo ipapo ko ndaizivei hangu pandakanovabvisa pant maiwe kani haa rino beche risina kana choya rakazvimba kuita kunge chitsuro. Ndakabva ndamira ndakayeva zibeche ravo pandakati ndichiribata ivowo vakabata mboro yangu uku maziso ari pabeche iro raichema misodzi nekuda mboro. Ndisati ndadii kunobatwa mboro ndini uyo tsaaaaa tsaaaaaa, maiguru vakangoti ah nhai bamunini musati mandisvira here.
Ndikati aah maiguru beche iro makasenga zvenyu zvikanzi manje ndirkuda kuti mumbotamba naro kusvika makusada, asi ndirikuda kukudzisai romance kubva kukiss kubata mazamu, magaro, beche matinji zvese. Chirarai ndikubatei mboro tipinde muma lessons chokwadi kurera imbwa nemukaka mangwana inoti wave nyama kudzidzisa ini ummmm aaa hameno ngatinzwei zvichaitika magwana tinoyenderera mberi nedzidziso yekutamba nebeche ramaiguru…
Read – Ndakabatiswa zibeche ramaiguru – Part 2
Read – Ndakabatiswa zibeche ramaiguru – Part 3
Ndakabatiswa zibeche ramaiguru